#3 IIFLETHI OKANYE IZINDLU EZIKWICOMPLEX Sowinski 10b - I-Airbnb
#3 IIFLETHI OKANYE IZINDLU EZIKWICOMPLEX Sowinski 10b
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAdam
UAdam unezimvo eziyi-187 zezinye iindawo.
UKUBHUKISHA INDAWO YOKUPAKA NGOKUQINISEKISA UKUFUMANEKA. Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinekhitshi, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, iTV, i-wifi kunye neetawuli kunye namashiti - 13 m2, KUMGANGATHO OSEZANTSI, UKUPHAKAMA OKUPHANTSI 210 cm. Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinomtsalane, ezitofotofo ezinazo zonke izinto ezinokusetyenziswa. Abantu bale mihla baziva benemibala ebangel 'umdla nokukhanya okwaneleyo. Inkonzo ekwizinga eliphezulu kwindawo esondeleyo, ethe cwaka kufutshane nemarike naphakathi esixekweni.
Amafulethi abekwe kumbindi weKrakow, kwindawo yamagosa, kwindawo ezolileyo yesithili esidumileyo. Emthunzini wokwakhiwa kweempawu ze "Unity Centre". Imizuzu emi-2 ukusuka kumjikelezo weMogilskie, apho siya kufumana uqhagamshelo lwezithuthi zikawonke-wonke ukuya kwicala ngalinye laseKrakow. Siza kuhamba ukuya kwiSikhululo sikaLoliwe esiPhambili kunye neGaleria Krakowska ngemizuzu eyi-10, okanye simise ngetram. Isikwere seMarike esiPhambili kukuhamba imizuzu eli-15, ngelixa iWawel Castle edumileyo ikumgama wemizuzu engama-25.
I like to travel so when I got the opportunity to rent my apartment once thought to share it with others as it used to during my travels. Krakow as a city offers both a beautiful,…
Siliqela eliselula elizimisele ukudibana nabantu abatsha. Sivuleleke kubantu abatsha esibaziyo. Sinomdla wokuhamba, ezemidlalo kunye nomculo ngendlela yakudala. Sisebenza kwimarike yezindlu. Siyavuya ukunceda kwaye siphendule yonke imibuzo.